देउवालाई बास्कोटाको जवाफ : नाकाबन्दीमा म्याउँ गर्न नसक्ने, अहिले ढाडे बन्ने ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
८ मंसिर, कास्की । पोखरामा एउटा चुनावी आमसभालाई सम्वोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भिर आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेरै लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो भूभागमा पारेर नयाँ नक्शा निकालेको देउवाको दावी थियो ।
मन्त्रीज्यूलाई आचार संहिता लाग्दैन ?
सञ्चारमन्त्रीका हैसियतले एक कार्यक्रममा भाग लिन पोखरा आएका मन्त्री बास्कोटा शनिबार यहीँ बास बसे । र, आइतबार बिहानै उनी पत्रकार महासंघको ब्यानरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भए । मंसिर १४ गते उपचुनाव हुन लागेको स्थानमा बहालवाला मन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर केही पत्रकारले आचार संहिता सम्झाए ।
कास्कीमा चुनाव हुँदैछ, आचार संहिता लाग्छ कि लाग्दैन ? पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाको जवाफ यस्तो थियो-
यहाँहरु सबैलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि चुनाव कास्कीमा मात्रै भइरहेको छैन, देशका ५२ वटा ठाउँहरुमा भइरहेको छ । यहाँहरुलाई म अर्को पनि बहुत विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, म त्यति कमजोर दलको सदस्य होइन, जसले काभ्रेदेखि चुनाव प्रचार गर्न कास्की आउनुपरोस् र कास्कीका जनताले मेरो साथ खोजुन् । कास्कीका जनता आफैं सक्षम छन् कि यहाँ भइरहेको चुनावमा कसलाई किन मतदान गर्ने उहाँहरुले आफैं बुझ्नुहुन्छ । कास्कीका जनताको क्षमतामाथि, उहाँहरुको विश्वासमाथि मैले कहीँकतैबाट प्रश्न उठाउने गरी वा भरथेग गर्न वहाँदेखि म यहाँ धाउनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । र, म यसबारेमा जानकार छु कि म चुनाव प्रचार गर्न आएको पनि होइन । चुनाव प्रचार गर्न बरु लर्कनका लर्कन मान्छेहरु, यहाँका मान्छेहरुभन्दा धेरै मान्छेहरु एयरपोर्टमा मैले देखेँ । यस विषयमा मलाई धेरै बोल्नु छैन । म कास्कीका जनताको, उहाँहरुको सार्वभौमिक अधिकारको फैसलाप्रति विश्वास गर्छु ।
पोखरामा पत्रकार माझ मन्त्री बास्कोटाले दिएको अभिव्यक्तिको मुख्य अंश
हाम्रो भाषा लर्बरिँदैन देशभक्तिको प्रश्नमा । नाकाबन्दीमा एक शब्द बोल्न नसक्ने, म्याउँ गर्न नसक्ने अहिले चाहिँ चुनाव आयो भनेर ढाडे बनेर कुर्लिएर हुन्छ ? चुनाव हार वा जितसँग यस्ता विषय ल्याएर जोड्नु हुँदैन ।श्राेत onlinekhabar
बैरेनी बजारमा जन्ती बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, ४० घाइते
काठमाडौंमा बस्ने गुल्मेली घर फर्किनुस् : चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ